Home News Shaqalaha xafiiska Hantidhawrka Qaranka oo qoraal ka soo saaray musuqa Maxamed Afgoye
Shaqalaha xafiiska Hantidhawrka Qaranka oo qoraal ka soo saaray musuqa Maxamed Afgoye
Sida aan qormadii shalay idinkuugu soo gudbinay, Hantidhowrka Qaranka Maxamed Maxamuud Afgooyo ayaa lugaha kula jira musuq-maasuq baahay. Waxa uu noqday will uu isticmaalo RW Kheyre una adeega danaha gaarka ee RW Kheyre isagana waxaa loogu badalay lacag iyo laaluush. Maxamed Afgooye ayaa jagada uu hadda jooga ku helay qabiil ka dib markii hantidhowrkii hore Nuur Farah la cayriyay kaas oo ay isku beel ka soo jeedaan. Hadaba waxa iyadana soo gaar MOL qoraal ay si wadajira u soo saareen shaqaalaha iyo madaxda sare ee Xafiiska hantidhawrka Qaranka kuwaas ku qeexaya musuqa uu ku hayo Afgooye hay’adii loo xilsaaray in ay ka hortagto musuq-maasuqa. Waxaan qorsh RW Kheyre yahay in Maxmed Afgooye noqdo Saadaq Joonkii xagga lacagta, loona isticmaalo waxyaabo ka baxsan sharciga.
Halkaan ka aqriso qoraalka ay soo saareen shaqalaha HQ oo buuxa:
Warkii shalaya MOL soo qortay
Previous articleRW Kheyre: “Go’aanka Wasiirada cusub lagu magacabay, MW Farmaajo qayb buu ka ahaa”
Next articleXaalada Jig-Jiga oo wali kacsan iyo heshiis hordhac ah oo la rabo in la hirgaliyo